जगतको सृष्टि बारे थारु संस्कृतिको कथा | मझेरी डट कम
editor — Sun, 03/26/2017 - 21:34
प्यारा भाइबहिनीहरू ! यो संसारको सृष्टि सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रहरूको दृष्टिकोण बेग्लाबेग्लै छ । सबैभन्दा प्रमाणित आधार चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण नै हो । यस कुरामा त्यत्ति ठूलो मतैक्यता छैन । यहाँ भने थारु संस्कृतिमा संसारको सृष्टि बारे रोचक कथा प्रस्तुत गरिन्छ ।
एक समय यहाँ चारैतिर अन्धकार र जलमग्न थियो । निरंजन ठाकुर नाम गरेका सत्परुष र अन्धाअन्धी दम्पति बाहेक कुनै प्राणी र जमिनको अस्तित्व थिएन । ती तीनै जना पानीमा तैरिएका थिए । तीनै जना शक्तिशाली थिए । अन्धाअन्धी दम्पतिबीच प्रगाढ मायाप्रेम थियो । एकले अर्काको भावनाको कदर गर्थे । पतिव्रता र पग्नीव्रतका कारणले उनीहरू शक्तिशाली भएका थिए । पतिसँग दिव्यदृष्टि थियो । उनी अघि र पछिका सम्पूर्ण कुरा जान्दथे । जलको वाहेक अर्थोकको आवाज सुन्ने स्थिति त्यहाँ थिएन । सत्परुष निरंजन ठाकुर संसारको सृष्टि गर्ने इरादाले चारैतिर घुमफिर गर्दै निरीक्षण गर्न थाले । अकस्मात् उनले अन्धाअन्धी दम्पतिलाई देखे । अब भने उनको दिमाखमा एक किसिमको बुद्धि आयो ।
उनी दम्पतिरहेदेखि पूर्व दिशामा गई “टुबटुब” भनेर आवाज निकाल्न थाले । त्यो आवाजका वारेमा जसले वर्णन गर्छ त्यसले शक्तिहीन भई मर्नु पर्थ्यो । घरिघरि “टुबटुब” आवाज आइरहेकाले अन्धीले केको आवाज हो, कसले निकालिरहेको छ भनी अन्धालाई सोधिन् । अन्धाले त्यसका वारेमा बुझ्ने र बुझाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने जवाफ फर्काए । अन्धी बडो जिद्दी गरिरहिन् । अन्धा चाहिँ “नजाने गाउँकोबाटै नसोध” भनी पन्छिदा भए । आखिरमा त्यो आवाजको वारेमा खुलस्त नबताएमा अन्धीले आत्महत्या गर्ने धम्की दिइन् । अन्धा त्यस्तो नसोच, यस कुराले हाम्रो अनीष्ट बाहेक अर्को फल हामी केही पाउँदैनौँभन्दा भए । बरु अब मर्छु नै भनेर अन्धी मर्न तयार भइन् । “हेरेर मर्नुभन्दा छेरेरै मर्नु निको” ठानी अन्धा सबै कुरा भन्न राजी भए । उनले भने, “हेर, हाम्रो विछोडको घडी आइपुगेछ । यी सम्पूर्ण कुरा बुझिसकेपछि हामी अलगअलग हुन्छौँ र हाम्रो प्राण पनि धरापमा पर्छ । हाम्रो तागत हराउँदै जान्छ र हामी मारिन पनि सक्छौँ ।” यत्ति कुरा सुन्दा पनि अन्धीको अडान कायमै भयो । अन्धाले अगाडिका कुरा भन्नै पर्ने भयो । उनले भने, “लौ सुन, यस जलमग्न ठाउँमा हामी वाहेक एक सत्परुष निरंजन ठाकुर नाम गरेका प्राणी छन् । उनैले हामीलाई देखी संसारको सृष्टि गर्ने इरादाले यो आवाज निकालेका हुन् । अहिले आवाज निस्केको दिशालाई पूर्व भनिन्छ ।” अब पश्चिम दिशामा “टुबटुब” भनेर आवाज निस्कन थाल्यो । त्यो आवाज निस्केको दिशालाई पश्चिम दिशा भनिन्छ भनेर अन्धा वेलिविस्तार लगाउँदा भए । यही रीतिले उत्तर र दक्षिण दिशाबाट पनि आवाज आयो र अन्धाले नै ती दिशाको नामाकरण गरी अन्धीलाई सुनाए ।
त्यस पछि उनीहरूको शक्ति हराउँदै गयो । सत्परुष निरंजन ठाकुरले कदभर्खाको रुप लिए र युद्ध गरी अन्धालाई मारे । अन्धाको मृत लासको दाहिने हात, देब्रे हात, दाहिने खुट्टा र देब्रे खुट्टा क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशामा फ्याँके र चार दिशा निर्धारण भयो । पेट चिरी माथि फ्याके र आकाश बन्यो । ढाड तल फ्याके र पाताल बन्यो । दाहिने आँखाबाट सूर्य बन्यो भने देब्रे आँखाबाट चन्द्रमा बन्यो । यत्ति गर्दा पनि जलमग्न अवस्था रहिरह्यो । त्यसैले कदभर्खा रुपी सत्परुष निरंजन ठाकुरले पानीमा माटोको जोर्डन हाली जमिन बनाउन झिँगे माछोको सृष्टि गरी चाँडो माटो ल्याउन पाताल पठाए । झिँगे माछा पाताल पुग्यो र माटो पनि भेट्यो । माटो उठाउन मुख गाड्दा उसको मुखको जुँगा नै त्यहीँ अल्झियो । केही गर्दा पनि ननिस्केकाले उसले माटो ल्याउन सकेन । धेरै काल वित्दा पनि माछो नफर्किएकोले हिले माछोको सृष्टि गरी काम अह्राए । त्यसले माटो ल्यायो । जोर्डन हालियो र जलमग्न क्षेत्र बिस्तारै बिस्तारै जमिनमा रुपान्तरण हुँदै गयो ।
जमिन थलथल गर्थ्यो अर्थात् हल्लिन्थ्यो । यस्तो ठाउँमा प्राणी अडिन सक्दैनन् भनी कदभर्खा रुपी सत्परुष निरंजन ठाकुर जमिनको नाइटो खोज्दै हिँड्न थाले र नेपालको वराह क्षेत्रमा नाइटो भेट्टाए । सुँगुरको रुप धारण गरी त्यो नाइटोलाई थुतुनोले क्याप्प समाएर माथि उचाल्दा जमिन स्थिर भयो र कडा माटोमा परिणत भयो । त्यसपछि उनले अरु प्राणीहरूको सृष्टि गर्दै गए । प्यारा भाइबहिनीहरू ! अहिले पनि सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्रमा सुँगुर (बराह)ले धर्ती माथि उचालेको प्रतिमा हेर्न सकिन्छ । त्यस प्रतिमाको दर्शन गर्न वर्षेनी लाखौँ भक्तजनको घुइँचो लाग्छ ।
आँशु, एकालव्य, जीवन, र दुनियाँ (मुक्तक)
सज्जन जस्तै लाग्छन
आकाशमा जून छैन
हास्यव्यङ्ग्यात्मक लोककविताका रूपमा उल्टी सवाई
बिहान नभई बतासले
निबन्ध शिल्पीको नयाँ कृति
दुई मुक्तक (तीज विशेष)